MUQDISHO, Soomaaliya - Gudiga KMG ee doorashada, ayaa maanta billaabey diiwaan-gelinta musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Shan Musharax oo uu kamid yahay Wasiirka Biyaha iyo Tamarta Saalim Caliyow Ibroow ayaa wajiga kowaad ee is-diiwaan-gelinta la guddoonsiiyey Shahaadooyinka Mushraxnimada.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarrow
Xildhiban Sheekh Cali Sheekh Maxamed
Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen)
Xildhibaan Saalim Caliyow Ibrow
Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe).
Gudiga ayaa hordhigay Wasiiro doonaya inay u tartamaan Xilka gudoomiyaha Gollaha shacabka shuruud adag oo ah in marka hore iska casilaan xilalka wasiir-nimo, islamarkaana maalinta diiwaangelinta keenaan warqada cadeynaysa Iscasilaadooda.
Illaa hadda waxaa si rasmi ah isku casilay Wasiiru dowlihii Wasaaradda Ganacsiga, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) iyo Wasiir ku xigeenkii Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta, Ibraahim Isaaq Yarrow.
Wasiirka Gaashaandhigga Maxamed Mursal ayaa kamid ah Wasiiradda laga dalbaday inay is-casilaan, waxaana la ogeyn sababta Saalim Caliyow Ibrow loo diiwaangeliyay isagoo aan ku dhawaaqin inuu xilka wasiir-nimo iska-casilay.
Dood ayaa ka dhalatay is-casilaadda Wasiirada Musharaxiinta ah, iyadoo Wasiirka arrimaha Dastuurka Cabdi Xoosh Jibriil uu sheegay in Dastuurka uu u ogolaanaya Wasiir inu u tartamo xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka, isagoo aan is-casilin.
Maalin berri ah ayay ku egtahay diiwaangelinta Musharaxiinta, iyadoo 30-ka bishan la dooran doono gudoomiye cusub oo bedeli doono Maxamed Cismaan Jawaari oo is-casilay 9-kii April, kadib mooshin laga keenay.
Xildhibaanada Garabka Jawaari ayaa soo bandhigay qorsho cusub, oo lagu soo beegay xilli...
Jadwalka doorashada Guddoonka Gollaha Shacabka oo la soo saaray
Soomaliya 22.04.2018. 23:06
Shaqa joojin lagu sameeyay ilaaladii amniga Jawaari [Akhri Sababta]
Soomaliya 05.04.2018. 13:33